I-post soups: zokupheka kunye nesithombe. Iisobho zokuqala kunye ezihlwabusayo zeLente. Ukulungiselela isobho esinomzimba.
Indlu yasekhaya Recipes Iisobho Borsch
Ukupheka kweesobho eziluhlaza
Iindlela zokupheka ngeyinyathelo zokupheka isobho kunye neefoto.
Ukutya kwansuku zonke komntu kufuneka kube yiyitya zokuqala. Iisobho ezihlwaya, i-borscht iyakubheka inyama okanye umhluzi wemifuno. Kodwa ukususela kungekudala silindele isithuba esikhulu, sinikeza iipespelele ezinqambileyo zonke iintsapho zithande.
Silungele ukukunika ezintathu zokupheka. Uhlasele ixesha elincinane kwaye ulungele ukupheka.
Sipheka isobho se-pean
Ngelishwa, akubona wonke umntu othanda isobho se-pea. Kodwa ngaphandle kokungathandabuzeki oku kuyisiqhamo esiluncedo nesinomhlwa. Ngokukodwa kuya kuba nefanelekileyo ngexesha lokuzila ukudla, kuba ngeli xesha kubaluleke kakhulu ukubandakanya kwimveliso yakho yokutya yentsapho ye-legume.
Iziqholo: amaqabunga e-bay, i-peppercorns, i-dill, ityuwa
Ioli e vuno
Uya kupheka le sobho ngeeyure ezimbini, ngoko thabatha ixesha kunye nokuphefumlelwa.
Ngaphambi kokuba, kufuneka udibanise iiperesi. Yenza ngcono ebusuku. Ukwenza oku, thatha enye yeglasi yeeperesi, uyizalise ngamanzi kunye nekhefu ukuhamba. Ngentsasa, ungaqala ukupheka.
Sceke ngokukhawuleza amabini aphakathi.
Igrate enye ikrotiro enkulu.
Ukushisa i-pan yokutshiza, uthele ioli kwi-fry u-anyanisi uze ubala. Qinisekisa ukuyikhupha, ngaphandle koko ingatshisa. Yongeza iidroti kunye nefry enye imizuzu eyi-10.
Iifama zihlanjwe, zifakwe kwisikhwama, zityhala amanzi uze ubeke umlilo. Iya kupheka ubuncinane iyure nesiqingatha.
Emva kokuba iiperezi ziphekwe, faka i-carasty and eons.
Yongeza iziqholo uze ubuyisele kubilisa.
Ukuba ufuna ukufezekisa ukunyameka, ukufana okufanayo, ugaya isobho esipheleleyo nge-blender. Unokuwukhonza nge-croutons e-white bread, enokuyenza.
Ukupheka kuxhomekeke kuShichi
Le ndlela idala, efuna indlela ekhethekileyo kunye nexesha elininzi. Ukupheka kuthatha malunga neeyure ezingama-4, kodwa umphumo ufanelekile.
Amakhowe amhlophe omisiwe
Iziqholo: ityuwa, ipepper
Ukulungiselela kulula, ngakumbi xa silandela imiyalelo yethu.
Okokuqala, uya kuqonda kunye neklabishi, uya kuba ne-700 g. Unokunqunyulwa kakhulu, ukwenzela ube yincinci, uyibeke kwi-goose, uyizalise ngeoli yezityalo. Yongeza isiqingatha seglasi yamanzi, vala isiqhekeza uze ubeke ehovini ngeeyure ezimbini neyesigamu. Ubushushu kwi-oven akufanele kube ngaphezu kwama-130 degrees.
Ngoku qhubela phambili kumakhowa amhlophe omisiwe, ufune okungenani ama-50 g.Thulule ngamanzi abilayo imizuzu engama-30. Emva koko, pheka ngobushushu obuphantsi malunga neyure. Pheka ukhusela amakhowe uze uthathe iinqununu. Musa ukuthululela umhluzi, kodwa usixinze.
Hlanganisa i-anyanisi kunye neeqathethi ngokukhawuleza. Ukucwilisa i-pan yocingo, yongeza ioli kunye nefry.
Emva koko faka ama-mushroom kwaye uphinde uphelele malunga nemizuzu eyi-15.
Amakhowe, iinqwelo kunye ne-anyanisi xuba kunye neklabishi uze uzalise umhluzi we-mushroom. Yiza kulungele kwisitofu, upheke isobho esinye isiqingatha seyure ngomlilo omncinci.
Yonke into, isobho likulungele, kwaye unako ukubakhonza kubathandekayo bakho. Eyona ndlela ingcono ngaphambi kokuba usebenze, yongeza i-garlic encinci uze ufefe ngetye. Ukuba ufuna ukubenza bafumane ukondla, unokongeza i-pearl gruel okanye amazambane.
I-Lenten isobho kunye neembotyi
Nangona ukuba le borski iguqulwa kumhluzi wemifuno, yinto entliziyweni kwaye iyinandi. Ukulungiselela kwayo, thabatha:
I-Sugar, pepper, iitrob, ityuwa
Ngaphambi kokuba uqale ukulungiselela, phawula ukuba iimbotyi kufuneka zizaliswe ngamanzi kwaye zihambe ngobusuku.
Ngentsasa, faka iimbotyi ukubilisa emanzini afanayo apho ubanjwe ubusuku bonke. Ukupheka okungenani iyure de ibe yincinci ngaphakathi.
Thatha iimbotyi uze upheke umhluzi ofanayo amazambane ezimbini, uthinte imivalo
Hlanganisa i-anyanisi kunye neerotothi ngokukhawulezileyo kwaye gazinga kwioli ye-vegetable kwi-prying pan. Emva koko wongeza unobumba lwetamatato uze ulubambe kancinci.
Kwipese ye sibini, iklashishi iinqwelo ezincinci kunye neebhunge, eziqhelile zibe yimichilo emincinci. Kwakhona unqumle iziqhumane uze udibanise epanini yocingo. Yifake encinane.
Yongeza zombini umququ kumbindi apho iifatata zenziwe khona.
Sika i-200 g yeefolum ezintsha kunye ne-anyanisi. Yongeza kwi isobho.
Faka iimbotyi eziphekiweyo epanini, ixesha kunye neziqholo uze upheke ukushisa okuphantsi ngaphantsi kweminye imizuzu eyi-10.
Ngaphambi kokuba usebenze, uhobise ngemifuno ephosiweyo.
Oku akuyona nje iresiphi eyinandi, kodwa eyonaqobo, njengokuba mhlawumbi ungasebenzisi i-prune kwi-borscht yokupheka. Yongeza isondlo esikhethekileyo, esiya kuyithandayo.
Zama kwaye ujabulele ukutya kwakho!
Borsch ebusika kwiibhanki - zokupheka ezilula kunye neefoto namavidiyo. I-Beef billet kunye ne-tomato unamathisela
Borsch nge sauerkraut
Borsch ebandayo yaseLithuania
I-Borsch kunye nezibambo zeengulube ezibhema
I-Pepper enezixhobo kunye nemifuno
Iingcamango zomtshato we-albhamu
Ukukhupha imifuno. Ukukhethwa kweebhotile zokulima imifuno
Ingubo yokuhlwa: iimpawu ezintathu ezingekho zohlanga
UTina Kandelaki, ngubani na?
Indlela yokubuyisela ushukela kumntwana?
Iindlela zokusombulula ingxaki ye-arthrosis
Unokunyamekela njani i-wig wendalo?
Ingxaki kwiintsebenziswano emva kokuzalwa komntwana
Indlela yokusebenzisa iibhola zangasese?
Amanyathelo omnxeba wokunakekelwa kwesikhonkwane
Silungiselela iphathi ekhaya: ifomathi yeqela
I-horoscope yezesondo ngamawele
Imikhwa yokutya ephazamisa isibalo